Shiinaha L-Lysine HCL CAS 657-27-2 loogu talagalay soo saarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha Pharma Grade (USP) | Salaad
Magaca Badeecada: L-Lysine
CAS MAYA.: 657-27-2
Lysine (oo loo soo gaabiyo Lys) waa mid ka mid ah halabuurka weyn ee borotiinka. Jidhku wuxuu ubaahanyahay Lysine oo kamid ah sideed amino acids muhiim ah. Laakiin Lysine ma soo saari karo jirku. Waa in lagu bixiyaa cuntada. Sidaa darteed waxaa loogu yeeraa "amino acidka ugu horeeya ee aasaasiga ah". Maaddaama ay tahay wakiil wanaajiya nafaqada, Lysine waxay sare u qaadi kartaa heerka isticmaalka borotiinka si ay si weyn kor ugu qaaddo nafaqada cuntada. Waxay sidoo kale wax ku ool u leedahay hagaajinta koritaanka, hagaajinta rabitaanka cuntada, yareynta jirrooyinka iyo jirka oo sii xoogaysanaya. Waxay udgoon kartaa oo ku hayn kartaa cuntada daasadaha ku jirta.
1) Waxaa loo adeegsaday diyaarinta isku-darka amino acid-ka iyo sameynta saameynta mid ka wanaagsan tan dhiig-ku-shubista borotiinka iyo waxyeellooyin yar.
2) Waa la samayn karaa kaabayaal nafaqo leh oo leh fiitamiino kaladuwan iyo gulukoos, si sahal ah ayey u nuugi kartaa mindhicirka caloosha ka dib afka.
3) In la wanaajiyo waxqabadka dawooyinka qaar lana hagaajiyo waxtarkooda.
Lysine waa nooc ka mid ah bini'aadamka amino acidka lagama maarmaanka ah. Waxay kor u qaadi kartaa shaqada dhiig-karka, dheecaanka caloosha, hagaajinta waxtarka isticmaalka borotiinka, kordhinta caabbinta cudurada, ilaaliso dheelitirka dheef-shiid kiimikaadka iyo u roonaanta carruurta jirka iyo horumarka garaadka.
1) In kor loo qaado tayada hilibka lana kordhiyo boqolkiiba inta hilibka caatada ah
2) In kor loo qaado waxtarka isticmaalka borotiinka quudinta lana yareeyo isticmaalka borotiinka ceyriin
3) Lysine waa xoojiye nafaqada calafka leh oo leh shaqo loogu talagalay wanaajinta rabitaanka xayawaanka iyo shimbiraha, iska caabinta cudurada, bogsashada nabarrada, tayada hilibka iyo xoojinta dheecaanka caloosha. Waa shey muhiim u ah isku darka dareemaha cranial, unuga jeermiska, borotiinka iyo haemoglobin.
4) Ka fogow jalaatada doofaarka, yaree qarashka quudinta iyo hagaajinta soo celinta dhaqaalaha
Lysine waxaa loo heli karaa qaabaynta astaamaha amino acid isku dhafan iyo sameynta saameynta ka wanaagsan tan borotiinka 'hydrolytic perfusion' iyo waxyeellooyinka yar. Waxaa laga dhigi karaa wakiilka xoojiya nafaqada ee leh fitamiino kaladuwan iyo glucoses, waxaana si fudud u nuugi karaa mindhicirka caloosha ka dib afka. Lysine sidoo kale waxay hagaajin kartaa waxqabadka daawooyinka qaar iyo waxtarkooda.
Shayga USP32 USP40
Muuqaal Budada cad ee cad
Aqoonsiga Waafaqsan Waafaqsan
Baaritaan 98.5% ～ 101.5% 98.5% ～ 101.5%
Qiimaha PH 5.0 ～ 6.0 -
Khasaare ku saabsan qalajinta ≤0.4% ≤0.4%
Hadhaaga dabka ≤0.1% ≤0.1%
Chloride (sida Cl) 19.0% ～ 19.6% 19.0% ～ 19.6%
Biraha culus (sida Pb) Pp15ppm Pp15ppm
Bir (sida Fe) Pp 30ppm Pp 30ppm
Sulfate (sida SO4) 0.03% 0.03%
Amino acids kale Waafaqsan Waafaqsan
Wasakhda dabiiciga ah ee dabiiciga ah Buuxin shuruudaha -
Wareeg gaar ah + 20.4 ° ～ + 21.4 ° + 20.4 ° ～ + 21.4 °
Hore: L-Leucine CAS 61-90-5 ee Fasalka Pharma (USP)
Xiga: L-Methionine CAS 63-68-3 ee Fasalka Pharma (USP)
L-Valine 72-18-4, Fasalka L-Threonine Pharm, 73-32-5 L-Isoleucine, Fasalka Farmashiyaha L-Leucine, Nafaqada xoolaha, Fasalka Cuntada L-Threonine,